လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်အပေါ် သံယောဇဉ်ဖြတ်တောက်ဖို့လိုဟု ကာချုပ်ဆို | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်အပေါ် သံယောဇဉ်ဖြတ်တောက်ဖို့လိုဟု ကာချုပ်ဆို
epa05291367 Senior General Min Aung Hlaing arrives to Naypyitaw International Airport in Naypyitaw, Myanmar, 06 May 2016. Myanmar president U Htin Kyaw, his wife Daw Su Su Lwin and Myanmar Foreign Minister and State Counselor Aung San Suu Kyi and Minister of Information Dr Pe Myint left from Naypyidaw International Airport to Laos for the first time inagoodwill visit as Myanmar's new government. EPA/HEIN HTET
လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်အပေါ် သံယောဇဉ်ဖြတ်တောက်ဖို့လိုဟု ကာချုပ်ဆို
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ၇၀ နီးပါး ရှိခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်အပေါ် သံယောဇဉ်ဖြတ်တောက်ဖို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နဲ့ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU) တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို တောင်းဆိုလို့မရကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့ကိုလည်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်နိုင်ဖို့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအနေနဲ့ NCA မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လကျနကျကိုငျ လမျးစဉျအပျေါ သံယောဇဉျဖွတျတောကျဖို့လိုဟု ကာခြုပျဆို
နှဈပေါငျး ၆၀ ကြျော ၇၀ နီးပါး ရှိခဲ့တဲ့ လကျနကျကိုငျ လမျးစဉျအပျေါ သံယောဇဉျဖွတျတောကျဖို့ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၃ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောမှာ ပွုလုပျတဲ့ မှနျပွညျသဈပါတီ (NMSP) နဲ့ လားဟူဒီမိုကရကျတဈအစညျးအရုံး (LDU) တို့ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ NCA လကျမှတျရေးထိုးတဲ့ အခမျးအနားမှာ ပွောကွားလိုကျတာပါ။
ဒီလိုပွောကွားရာမှာတော့ ဒီမိုကရစေီ စနဈရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈတဲ့ လကျနကျစှဲကိုငျပွီး မိမိတို့ရဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှကေို တောငျးဆိုလို့မရကွောငျး နားလညျသဘောပေါကျကွဖို့ကိုလညျး ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျက ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စဈမှနျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ထူထောငျနိုငျဖို့ ပထမဆုံး ခွလှေမျးအနနေဲ့ NCA မှာ လကျမှတျရေးထိုးကွဖို့ကိုလညျး ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleNCA က စတင်ခြင်း အသစ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
Next articleNCA ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ရဲ့အစလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော